November 2018 – Page 2 – Kichuu
Ethiopian, Abiy’s reforms makes Addis Ababa Africa’s air gateway Ethiopia has overtaken Dubai as a conduit for long-haul passengers to Africa, highlighting the success of the state airline’s expansion drive and the reforms of its [Read More]
Dambalii Mormii ajjeechaa uummata Oromoo magaalaa Naqamteetti taassifamaa jiru. Du’ii fi ajjeechaan Oromoorraa haa dhaabbatu! Breaking_News Motummaan Naannoo oromiyaa Dr lamma magarsaa Guyyaa Araa Dhummatti ilmaan Oromoo irraati demma jiru ilalchisee Waaraana bilisumaa Oromoo WBOdhan WBO [Read More]
ONLF Senior Leadership To Arrive In Ethiopia On Saturday A 20-member delegation composed of senior leadership of the Ogaden National Liberation Front (ONLF) will arrive in Ethiopia on Saturday. Among members of the delegation include [Read More]
Oromiyaa: Hawaasni Magaalaa #Naqamtee ajjeechaa suukkanneessaa ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru hiriira guddaa gochuun balaaleffataa jira. Raadiyoo Daandii Haqaa – RDH “Uummatni mgalaa #Naqmtee wal dhageettii fi karaa naga qabeessaan #AJJEECHAA_NURRAA_DHAABAA! #GOOTOTA_KEENYA_NI_KABAJNA! jechuun dhaadachaa gaaffilee qabu bulchiinsa magaalaatti dhiheeffachuuf imalaa [Read More]
Oromoo qe’eerraa buqqisuun dhumatuuf jira; ammoo haga dhumatutti jabaachuun dirqama keenya.
Oromoo qe’eerraa buqqisuun dhumatuuf jira; ammoo haga dhumatutti jabaachuun dirqama keenya. Haga darbutti nama daddarba!! Namni baayy’een waa’ee qoteebulaa Naannoo Finfinnee maaliif dubachuu didde jedheetu qeequu jalqabe. Waa’ee qoteebulaa eenyuun dura Kan dubate keessumaayyuuu qoteebulaa [Read More]
Sirna Awwwaalcha poolisii Oromiyaa gaggeefamaa jiru Daangaa Oromiyaa osoo eeguu
Sirna Awwwaalcha poolisii Oromiyaa gaggeefamaa jiru Daangaa Oromiyaa osoo eeguu #Amboo-Sirna Awaalcha goota #Caalumaa_Gutataa Osoo lubbuu Ummata isaa baraaraa jiruu wareeggamee guyyaa har’aa raawwateera. 20/3/2011 Sirna Awwwaalcha poolisii Oromiyaa Magaalaa Ambootti gaggeefamaa jiru Daangaa Oromiyaa osoo eeguu [Read More]
As Southern Nations break free, pressure mounts on EPRDF By William Davison, Kulle Kursha, November 28, 2018 Sidama progress towards statehood triggers copycat moves SNNP break-up is potential problem for SEPDM and EPRDF Splits and [Read More]